स्टिभ रोजेनबर्ग (बीबीसी)
फागुन १६ , मस्को
एउटा म कुरा स्वीकार्छु। धेरैपटक मैले सोचें– ‘पुटिनले कहिल्यै त्यसो गर्ने छैनन्।’ तर हरेकपल्ट उनले त्यही गर्छन् ।
‘उनले कहिले क्राइमिया कब्जा गर्ने छैनन्।’ तर गरे।
‘उनले डोनबासमा कहिल्यै युद्ध गर्ने छैनन्।’ तर गरे। ‘उनले पूर्ण क्षमताका साथ रुसलाई कहिल्यै आक्रमण गर्ने छैनन्।’ तर गरे।
म अब यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि ‘कहिल्यै गर्ने छैनन्’ भन्ने वाक्यांश भ्लादिमिर पुटिनमा लागू हुँदैन। र, यसले अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। ‘उनले अगाडि बढेर परमाणु बटम दबाउनेछन्? उनले त्यसो गर्लान्?’
यो कुनै सैद्धान्तिक प्रश्न होइन। भ्लादिमिर पुटिनले नेटो देशका नेताका तर्फबाट युक्रेनलाई ‘आक्रामक अभिव्यक्ति’ दिएको आरोप लगाउँदै आफ्नो देशको आणविक सेनालाई ‘विशेष सतर्कता’मा राखेका छन्।
रुसका राष्ट्रपति पुटिनले कस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, छन् ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। गत बिहीबार जब उनले टेलिभिजनमा ‘विशेष सैन्य अपरेसन’ (वास्तवमा युक्रेनमा पूर्ण क्षमताका साथ आक्रमण) घोषणा गरे, तब उनले डरलाग्दो चेतावनी जारी गरे।
उनले भने, ‘बाहिरबाट कसैले हस्तक्षेप गर्ने सोचेको छ भने वा कसैले त्यसो गर्छ भने उसले त्यस्तो परिणाम भोग्नुपर्नेछ, जुन इतिहासमा कहिल्यै देखिएको थिएन।’
नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता र नोबाया गजेटा अखबारका प्रधान सम्पादक दिमित्री मुराटोभ भन्छन्, ‘पुटिनका शब्द परमाणु आक्रमणको प्रत्यक्ष धम्कीजस्तै सुनिन्छन्।’
उनले भने, ‘त्यो टेलिभिजन सम्बोधनमा पुटिनले क्रेमलिनको नेताका रूपमा मात्र नभई ग्रहको सार्वभौमसत्ताको रूपमा व्यवहार गरिरहेका थिए। जसरी कारको मालिकले आफ्नो औंलामा चाबीको औंठी घुमाउँछ, पुटिनले आणविक बटम घुमाइरहेका थिए। उनले धेरैपटक भने– यदि रुस रहँदैन भने हामीलाई यो ग्रह किन चाहियो? तर यसमा कसैले ध्यान दिएका छैनन्। तर यो कुरा निकै खतरनाक छ कि रुसले चाहेजस्तो व्यवहार भएन सबै बर्बाद हुनेछ।’
‘रुसबिनाको संसारको के अर्थ?’
२०१८ को वृत्तचित्रमा राष्ट्रपति पुटिनले टिप्पणी गरेका छन्, ‘…यदि कसैले रुसलाई समाप्त पार्ने निर्णय गर्छ भने त्यसको जवाफ दिने कानुनी अधिकार हामीसँग छ। हो, यो मानवता र विश्वका लागि विपत्ति हुनेछ। तर म रुसको नागरिक हुँ र यो देशको राष्ट्रपति पनि। हामीलाई रुस नभएको संसार किन चाहियो?’
अब २०२२ को कुरा गरौं। पुटिनले युक्रेन विरुद्ध पूर्ण मात्रामा युद्ध छेडेका छन् तर युक्रेनी सशस्त्र सेनाले पनि कडा प्रतिरोध गरिरहेको छ। पश्चिमी देशहरू पनि क्रेमलिनलाई स्तब्ध पार्ने उद्देश्यले सम्भावित प्रतिबन्धहरूमा एकजुट भएका छन्। यसपछि पुटिनको व्यवस्थाको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने सम्भावना छ।
मस्कोस्थित रक्षा विशेषज्ञ पावेल फाल्गेनहोर भन्छन्, ‘पुटिन कठिन अवस्थामा छन्। उनीसँग अहिले धेरै विकल्प छैन। एकपटक पश्चिमी देशहरूले रुसको केन्द्रीय बैंकको सम्पत्ति रोक्का गरे र रुसी वित्तीय प्रणाली ध्वस्त भए भने यसबाट पूरै व्यवस्था काम नलाग्ने हुनेछ।’ ​
पुटिनका विकल्प के छन्?
युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणविरुद्ध विश्वभर प्रदर्शन भइरहेको छ। तस्बिर : ईपीए
युक्रेनमा रुसले गरिरहेको आक्रमणको विरोधमा विश्वभर प्रदर्शन भइरहेका छन्।
उनी भन्छन्, ‘उनीहरूसँग एउटा विकल्प छ– युरोपमा ग्यास आपूर्ति कटौती गर्नु। यसले युरोपेली देशहरूलाई निहुर्याउन सक्छ। अर्को विकल्प भनेको बेलायत र डेनमार्कको बीचमा उत्तरी सागरमा कतै परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने र के हुन्छ हेर्ने।’
यदि भ्लादिमिर पुटिनले आणविक विकल्प रोजे भने के उनका निकट कसैले उनलाई त्यसो गर्नबाट रोक्न सक्लान्?
नोबेल पुरस्कार विजेता दिमित्री मुराटोभ भन्छन्, ‘रुसी राजनीतिज्ञहरूले कहिल्यै जनताको पक्ष लिँदैनन्। तिनीहरू सधैं सरकारका पक्षमा हुन्छन्।’
भ्लादिमिर पुटिनको रुसमा शासक नै सर्वशक्तिमान छ। यो त्यस्तो देश हो जहाँ पुटिनविरुद्ध उभिने व्यक्ति नभएसरह छ।’
पावेल फाल्गेनहोर भन्छन्, ‘पुटिनका सामु खडा हुन सक्ने कोही छैन। हामी खतरनाक स्थितिमा छौं।’
युक्रेनको युद्ध भ्लादिमिर पुटिनको युद्ध हो। यदि क्रेमलिन नेताहरूले आफ्नो सैन्य लक्ष्य हासिल गरे भने सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा युक्रेनको भविष्यमा शंका उत्पन्न हुनेछ। यदि रुसको अभियान असफल भयो र उसका सैनिक ठूलो संख्यामा हताहत भए भने त्यसपछि क्रेमलिनले थप खतरनाक कदम चाल्ने डर छ। जब ‘कहिल्यै गर्दैनन्’ भन्ने नियम उनमा लागू हुँदैन। बीबीसी